တင်ပါး ပြည့်ပြည့်လေး ဖြစ်စေဖို့ ဘာစားမလဲ............ - Hello Sayarwon
တင်ပါး ပြည့်ပြည့်လေး ဖြစ်စေဖို့ ဘာစားမလဲ............
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 29/01/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လေဒီလေးတွေက တင်ပါး ပြည့်ပြည့်လေး နဲ့ဆိုရင် ဘာဝတ်ဝတ်လှတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်နော်။ ဒီတော့ တင်ပါးပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ လှအောင် ဘာတွေစားကြမလဲ……. ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ ပြောပြပေးပါရစေ။
တင်ပါး ပြည့်ပြည့်လေး နဲ့လှစေဖို့ ဘာစားမလဲ…………..
တင်ပါးလေးက ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေးနဲ့ လှစေဖို့ဆိုရင်
ခန္ဓာကိုယ် အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ပရိုတင်း ၁.၆ ဂရမ် ကနေ ၁.၈ ဂရမ်အထိ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေဒီအများစုက ပရိုတင်းကို အလုံအလောက်စားမိခဲကြပါတယ်။ ဒီတော့ ပရိုတင်း လုံလောက်ပြည့်ဝစွာရရှိစေဖို့ဆိုရင် နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးရင်း ပရိုတင်း ရှိတ်ကို တစ်ခွက်လောက် မှန်မှန်သောက်ပေးပါ။
Chia seeds မှာ ပရိုတင်း နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေပါဝင်နေပါတယ်။ Chia seeds ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ပရိုတင်း ၁၄ ဂရမ် ပါဝင်နေပါတယ်။ Chia seeds မှာ omega-3၊ omega-6 နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်တွေ၊ အမျှင်ဓာတ်တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ငါးမှာ omega-3-fatty acids လိုမျိုး အကျိုးပြုအဆီတွေနဲ့ ပရိုတင်းတို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်၊ တူနာ၊ မက်ကာရယ် တို့လိုမျိုး ငါးတွေကို စားသုံးပေးပါ။
ဟင်းနုနွယ်မှာ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ကြွယ်ဝမှုက သွေးတွင်းကိုလက်စထရော နဲ့ သွေးတွင်းအဆီတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
စားလိုက်ရင် ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ အရသာရှိတဲ့ ထောပတ်သီးမှာ ဗီတာမင် E၊ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် B6 နဲ့ ဗီတာမင် C၊ ပရိုတင်း နဲ့ သတ္တုဓာတ် တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီက ရောင်ရမ်းမှုကိုကျစေနိုင်ပြီး ကြွက်သားတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
နှမ်းကြတ်စေ့မှာ ကျန်းမာတဲ့အဆီ နဲ့ ပရိုတင်းတို့ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ နှမ်းကြတ်စေ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာမှာ ပရိုတင်း ၁.၅ ဂရမ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တင်သားပြည့်ပြည့်လေးလှချင်တယ်ဆိုရင် နှမ်းကြတ်စေ့ တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းစာ စားပေးပါ။
တင်သား ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ လှစေဖို့ဆိုရင် ဥအမျိုးမျိုးက မဖြစ်မနေစားပေးသင့်ပါတယ်။ ဥအမျိုးမျိုးမှာ အမိုင်နိုအက်ဆစ် ပါဝင်နေသလို ကြွက်သားတွေ တည်ဆောက်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပြည့်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ အရွယ်တော် ကြက်ဥတစ်လုံးမှာ ပရိုတင်း ၆ ဂရမ် ပါဝင်နေပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို အနှစ်ဖယ်ထားတဲ့ ကြက်ဥ ၂ လုံး ကနေ ၃ လုံး လောက်အထိ စားပေးလို့ရပါတယ်။
ပဲအမျိုးမျိုးမှာ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ပဲနီလေး၊ ပဲဝါလေး တို့လိုမျိုး ပဲတွေကို စားပေးပါ။
မှိုက ပရိုတင်း ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအရွက် တစ်မျိုးပါ။ မှို ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ကယ်လ်လိုရီ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ပရိုတင်း ၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားတွေ မစားချင်ဘူး ပရိုတင်း ပြည့်ပြည့်ဝဝရပြီး တင်ပါး ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် မှိုစားသုံးပေးလို့ ရပါတယ်။
အမဲသားက ပရိုတင်း အကြွယ်ဝဆုံး အသားတစ်မျိုးပါ။ အမြဲစားတာ မကောင်းပေမယ့် တင်ပါးလေး ပြည့်စေဖို့ဆိုရင် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အမဲသား စားပေးပါ။
အဆီပြည့်နို့တွေက ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ် တို့ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အဆီပြည့် နို့တစ်ခွက် ပုံမှန်သောက်လို့ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မှန်မှန်လုပ်ပေးပါ။
ကုလားပဲမှာ ပရိုတင်း၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ဖောလိတ်၊ သံဓာတ်၊ အဆီဓာတ် နဲ့ ဖော့စဖရိတ်တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက ကြွက်သားတွေကို အားဖြည့်ပေးပြီး သန်မာစေနိုင်မှာပါ။
အရသာရှိတဲ့ ကန်စွန်းဥက ကစီဓာတ်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်၊ သတ္တုဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ဆန်လုံးညို၊ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ကြက်ရင်အုံသား၊ ကြက်ဆင်သား၊ ဒိန်ချဉ် စတာတွေကို စားပေးလို့ရပါတယ်။
ကဲ..တင်ပါးပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ လှစေဖို့ဆိုရင် အခုပြောခဲ့တာလေးတွေကို စားသုံးကြည့်ဖို့ ပြောပါရစေနော်။
25 Foods You Can Consume To Get Naturally Firm And Big Buttocks Fast https://www.stylecraze.com/articles/foods-that-make-your-buttocks-bigger/ Accessed Date 17 March 2020
Foods that Make Your Hips Bigger https://www.myhomeproducts.com/health/foods-make-hips-bigger/Accessed Date 17 March 2020
What Food Makes Your Hips Big? https://www.livestrong.com/article/313701-what-food-makes-your-hips-big/ Accessed Date 17 March 2020